Fametahana bilaogy: bilaogin'ny marketing atody | Martech Zone
Talata, Jolay 17, 2007 Sabotsy, Oktobra 20, 2012 Douglas Karr
Manaraka ny fanaovana ny am-polony ny mpanao mofo dia ny mampihomehy, The Blog momba ny varotra atody!
Momba ny varotra atody: Susan Payton no mpiara-miasa amin'ny marketing atody. Manana MBA avy amin'ny University of Central Arkansas izy, ary manana mari-pahaizana BA amin'ny anglisy sy frantsay. Susan dia niasa tamin'ny asa mpanoratra nandritra ny folo taona. Izy izao dia mampiasa ny fahaizany mamorona amin'ny fahalalàny sy ny traikefany amin'ny varotra, vola ary orinasa.
Tiako ny bilaogy 'gazety' madio amin'ny bilaoginao! Madio sy malalaka be ny fisehosehoana - vita tsara! Heveriko fa misy fotoana mety ao amin'ny bara navanao hametrahana Subscribe to RSS or to Email link. Angamba fanamarinana ankavia ny rohy An-tranonao sy Momba… ary avy eo manamarina ny endrika famandrihana sy ny kisary RSS. Raha tsy ao amin'ny bara nav, fa eo ambany ilany havanana.
Manoro hevitra ny kisary RSS aho
ho an'ny ankamaroan'ny tranonkala dia eo amin'ny sisiny ambony sy ankavanan'ny pejy 'ambonin'ny vala'… tsy ilaina izany raha mihodina. Na dia misy fahaizan'ny RSS aza ny ankamaroan'ny mpitety tranonkala ankehitriny - ny kisary RSS dia antso an-tsokosoko hataon'ny olona hisoratra anarana!
Sans serif endritsoratra tsy dia sariaka toy ny endritsoratra serif hamakiana - saingy mahalana ianao mahita fonosana serif tsy tapaka hamaky lahatsoratra amin'ny Internet. Tsy azoko antoka hoe maninona nefa tsy ampiasaiko koa. Mba hanonerana izany, dia miantoka ny famakiako ny haben'ny endritsoratra aho. Nandritra ny fotoana iray dia nahita haben'ny endri-tsoratra mihena amin'ny tranonkala izahay rehefa lasa lehibe kokoa ny mpanara-maso.
Ankehitriny ny mpanara-maso dia goavana miaraka amina fanapahan-kevitra avo dia avo - mahatonga ny endritsoratra ho kely kokoa sy sarotra vakina kokoa! Tonga boribory feno izahay. Manoro hevitra aho ny hampiakatra ny haben'ny endri-tsoratra amin'ny atiny roa habe. Azonao atao izany ho an'ny pane eo afovoanao amin'ny alàlan'ny fanampiana font-size: 13px amin'ny #contentmiddle ao amin'ny styleheet anao.
Rehefa manao ireo torohevitra ireo aho dia mahita foana fa mandika ny lalàko manokana! Na izany aza, manoro hevitra bebe kokoa aho ny fampiasana lohateny (h2 sy / na h3) ao anatin'ny atiny ary koa lisitra misy bala sasany. Raha ny marina, ny olona dia tsy 'mamaky' bilaogy sy tranokala betsaka araka izay itodihany azy ireo. Mila antsika izany tapa-kazo ny atiny. Hevero ho toy ny taolana ny bilaogy tsirairay. Manampia lohateny ho an'ny loha, vatana, tongotra ary tongotra. Avy eo ampio teboka bala vitsivitsy ho an'ny taolan-tehezana. Rehefa mandinika ny asanao ianao, dia alao antoka fa rehefa tsy hitanao ilay lahatsoratra, azonao atao ny mahatakatra ny zavatra ezahin'ny lahatsoratra ankapobeny lazaina fa tsy vakianao akory ny teny rehetra.
Miaraka amin'ny lohateny sy bala - aza hadino ny mampiasa sary hanavahana ny hafatrao. Zava-dehibe indrindra izany raha ny mpamakinao mamaky ny hafatrao avy amin'ny mpamaky fahana izay misy ny hatsarana rehetra ao amin'ny bilaoginao
voasivana. Ny sary iray dia mendrika ny mpamaky arivo! Mampanantena aho. Hahita vitsivitsy amin'ireo lahatsoratro ianao nefa tsy misy sary ary tsikaritro fa fanamafisana eo noho eo eo ho eo amin'ny tsindry mankany amin'ireo lahatsoratro avy amin'ny fahana nataoko.
Efa nieritreritra ny hametaka ny tranokalanao amin'ny bilaoginao ve ianao sa ny mifamadika amin'izany? Heveriko fa tsy mila be loatra ny famindrana ny logo anao amin'ny bilaoginao na hampiasana ny bilaoginao ho ivon-toeran'ny tranonkalanao aza. Ny fironana tato ho ato dia mampitambatra ny roa… ny bilaogy dia mitovy amin'ny tranonkala bebe kokoa ary ny tranonkala dia mampiasa teknika fanaovana bilaogy bebe kokoa. Nanana tranokala nandritra ny fotoana kelikely aho, nantsoina Coders4Hire. Hitako taorian'ny lahatsoratra vitsivitsy izay nampitomboako ny orinasako haingana kokoa tamin'ny bilaogiko noho ny tamin'ny tranokalako! Mety hahita an'io koa ianao.
Farafaharatsiny farafahakeliny, alao antoka fa mandefa rohy mankany amin'ny bokinao eo amin'ny sisiny ianao! Ny bokinao, Torohevitra momba ny mpandraharaha 101, hitondra fitokisana betsaka amin'ny feon'ny bilaoginao rehefa manohy manangana fahefana ianao! Ary koa, hampiroborobo ny varotrao izany rehefa mitombo ny fahatokisana ny bilaoginao.
Izy io koa dia handray ny toerana fotsy ao amin'io tsanganana io. Tsy miantso anao aho - mety tsy mbola niasa tamin'ny lohahevitra ianao!
Tsikaritro ny mari-pamantarana meta misy duplicate ao amin'ny lohateninao - saingy banga ny teny lakile. Manoro hevitra roa aho meta tag plugins izay nosoratako tamin'ny lahatsoratra teo aloha.
Tokony hahatonga anao ho be atao mandritra ny fotoana fohy izany! Ampahafantaro ahy ny toetran'ny bilaoginao aorian'ny fampiharana ny sasany amin'ireo fanovana ireo. Mahareta! Fahombiazana amin'ny fanaovana bilaogy no tiana horesahina Votoatiny, filana ary fotoana!. Aza mba vahiny ihany koa ianao - tianay ny mamerina mamaky ny fandrosoany!
Tags: toro-hevitra amin'ny bilaogybilaogy marketing atody
Blaogin'ny orinasa: Fanontaniana folo voalohany avy amin'ny orinasa